t-nhare inomutsa sim starter kit mutengo ku $ 20; coupon kodhi inounza mutengo pasi zvakaderera se $ 0
Kuru Nhau & Ongororo T-Nhare inosimudza SIM yekutanga kit mutengo ku $ 20; coupon kodhi inounza mutengo pasi zvakaderera se $ 0
T-Nhare inosimudza SIM yekutanga kit mutengo ku $ 20; coupon kodhi inounza mutengo pasi zvakaderera se $ 0
T-Mobile yakasimudza mutengo weiyo 3-in-1 SIM Starter Kit kune ese maviri akabhadharwa uye akabhadharwa maakaundi. Aimbove madhora gumi neshanu, iyo kit iko zvino yatengwa pamadhora makumi maviri. Pamutengo iwoyo, unogashira nano SIM kadhi ine maadapter eMicro uye akaenzana SIM size. Paunotora nhare yako isina kuvhurwa mutsamba kubva kuT-Mobile, isa SIM kadhi mune inoenderana nhare (kuve nechokwadi chekushandisa maadapter akakodzera kana zvichidikanwa). Fonera T-Mobile uye uite kuti SIM kadhi ishandiswe.
Tinogona kukuudza kuti nyika & apos; yechitatu yekutakura yakakura ine madhiri akati wandei aripo ayo achatora mutengo wekutanga SIM kadhi kit pasi kusvika ku $ 0 kune avo vane account yakabhadharwa. Kana iwe uri kushandisa yakapusa Sarudzo chirongwa, isa koponi kodhi SIMSALE pakutarisa, uye kadhi racho mahara. Kana iwe uine T-Mobile pre-yakabhadharwa account, isa coupon kodhi SIMDEAL uye uchabhadhariswa chete $ 4.99.
Iyo SIM kadhi inoshanda neakavhurwa GSM nhare dzinowirirana neBand II (1900 MHz) kana IV (1700/2100 MHz). Nhare dzinosangana nezvinodiwa izvi dzinoshanda pane T-Mobile network. Uye zvakare, iyo SIM kadhi ichashanda nefoni dzese dzeT-Mobile. Izvi 3-in-1, kana TrioSIM makadhi, akatanga kuburitswa muna Chikumi apfuura .
Hatizive & maapos; hatizive kuti macode ekuponi maviri achanakira kwenguva yakareba sei. Naizvozvo, kana iwe uchida kuhodha iyo 3-in-1 SIM Starter Kit kune yako yakavhurika GSM kana T-Mobile yakashongedzwa nhare, zviri mune zvaunonyanya kufarira kuzviita izvozvi!
T-Nhare inosimudza rondedzero yemakadhi ayo eTrioSIM kusvika kumadhora makumi maviri pamberi pekodhi yekodhi
chinyorwa: T-Mobile ( 1 ), ( piri ), TmoNews
t nhare mbozha uye chinja
lg g3 marshmallow kugadzirisa t nhare
Samsung uye Zvakanakisisa Kutenga zvinopa zvikwereti zvakakura pane iyo Galaxy Tab S4
Samsung Galaxy S7 pamupendero inoputika ichichaja
Samsung Galaxy Z Fold 2 vs Galaxy Note 20 Ultra: Iyo yakasarudzika vs cosmic
Mira kugovana yako data! MetroPCS 'chirongwa chitsva chinopa nhengo yega yega yemhuri yake data re4G LTE
Motorola inosarudza kuburitsa Android Wear 2.0 yeMoto 360 Sport
Yakanakisa Walmart Nhema Chishanu madhiri: zvatinotarisira
iPad Air 4 vs iPad Pro: ndeipi yekutenga?
T-Mobile ine chirongwa chitsva chekubhadharisa cheakakwira-mhanyisa mafoni hotspot vakapindwa muropa
T-Mobile chinyararire inowedzera yayo yepakati-bhendi 5G network kune mamwe matatu makuru maguta
Yakaputsika Chinhu Chinzvimbo Mvumo Nemienzaniso